विश्‍वभर कोरोना संक्रमितको संख्या एक करोड नाघ्यो,५० लाखभन्दा बढी निको भए - NA MediaNA Mediaविश्‍वभर कोरोना संक्रमितको संख्या एक करोड नाघ्यो,५० लाखभन्दा बढी निको भए - NA Media
विश्‍वभर कोरोना संक्रमितको संख्या एक करोड नाघ्यो,५० लाखभन्दा बढी निको भए
करिब ५ लाखको मृत्यु......
कोरोना भाइरसबाट विश्वभर संक्रमित हुनेको संख्या एक करोड नाघेको छ । जोन्स होप्किन्स विश्वविद्यालयको कोरोना भाइरस रिसोर्स सेन्टरका अनुसार आइतबार दिउँसो कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या एक करोड नाघेको हो ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म विश्वका विभिन्न देशमा गरी संक्रमितको संख्या १०,०१५,९०४एक करोड पन्ध्र हजार नौ सय चार रहेको छ । त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४ लाख ९९ हजार ४ सय ८६ रहेको छ । त्यस्तै संक्रमण पुष्टि भएकाहरुमध्ये ५० लाख ७७ हजारभन्दा बढी निको भएका छन् ।
कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा आइतबार दिउँसोसम्म २५ लाखभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । त्यस्तै अमेरिकामा एक लाख २५ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । अमेरिकामा निको हुनेको संख्या करिब ६ लाख ८० हजार रहेको छ ।
त्यस्तै अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी प्रभावित ब्राजिलमा करिब १३ लाख १३ हजार संक्रमित भएका छन् भने करिब ५७ हजारको मृत्यु भएको छ । ब्राजिलमा ७ लाख २७ हजारभन्दा बढी निको भएका छन् ।
त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेको रुसमा संक्रमितको संख्या करिब ६ लाख ३३ हजार नाघेको छ । रुसमा कोरोना संक्रमणबाट ९ हजार ६० जनाको मृत्यु भएको छ । रुसका ३ लाख ९८ हजारभन्दा बढी निको भएका छन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणको हिसाबले भारत अमेरिका, ब्राजिल र रुसपछि चौथो स्थानमा रहेको छ । भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ५ लाख २८ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १६ हजारभन्दा बढी नाघेको छ ।
विश्वका विभिन्‍न देशमा लकडाउन खुकुलो गरेसँगै कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले संक्रमण अझ बढ्न सक्ने चेतावनी दिँदै पूर्वसावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
Gallery image with caption: चिनियाँ राजदुतको सक्रियताले टरेको हो ओलीको सत्ता संकट ?
Gallery image with caption: नेपालमा नयाँ कोरोना संक्रमित घट्ने क्रममा,४७ प्रतिशत निको भए
Gallery image with caption: १६ जिल्ला ‘कोरोना फ्री’,नयाँ संक्रमित देखिएन
Gallery image with caption: किन झन् झन् उत्तेजित बन्दै छन् ‌ओली?
Gallery image with caption: असंवैधानिक अभ्यासको खतरा
Gallery image with caption: बै.रो लागी पुन:श्रम स्विकृति दिन थालियो,नयाँ का हकमा खुल्न बाकी
Gallery image with caption: कोरोना भाइरसबाट कहाँ कतिले ज्यान गुमाए ?
Gallery image with caption: हिमालय एयरलायन्सको एक क्याबिन क्रूमा पनि देखियो कोरोना